Heshiis laga gaaray qilaafkii Jubbaland! Maxa ka soo baxay kulankii A. Madoobe, Seeraar iyo Xidig? | wardeeqnews News Online News
Heshiis laga gaaray qilaafkii Jubbaland! Maxa ka soo baxay kulankii A. Madoobe, Seeraar iyo Xidig?
Waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay ka socday magalaada Naiorbi ee dalka Kenya kulan u dhaxeeyay madaxdii Jubbaland ee uu khilaafku ka dhaxeeyay. Kulankaas oo ay soo qaban qaabisay dowlada Kenya ayaa waxa ku kulmay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmad Madoode, Cabdinasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig oo uu wehliyo gudoomiyahiisa Baarlamaanka Shiikh Dahir.
Kulanka oo wajigiisii horay socday mudo saacado ah ayaa waxa la isla gartay in la soo afjaro gabi ahaanba qilaafkii u dhaxeeyay madaxda, qilaafkaas oo ka dhashay doorashadii sanadkii hore ka dhacday Jubbaland. Dhanka kale heshiiskaan ayaa waxa soo dadajiyay Dowlada Fedaraalka oo ku balan furtay kooxda isbadal doonka iyaga oo ka waayay taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed si ay u sii wadaan dagaalka ka dhanka ah Axmad Madoobe.
Heshiiska la filayo in dhowrka cesho ee soo socda in lagu kala saxiixdo magalaada Nairobi ayaa waxa uu soo afjarayaa khilaafkii daba dheeraaday ee u dhaxeeyay madaxda Dowlad Goboleedka Jubblanad. Dhanka kale waxaa markii ugu horeeysay Jubbaland ka soo wajahayo Farmaajo iyo kooxaha uu ku shaqeeysto mucaarad xoogan oo hal aragti ka qaba Dowlada Fedaraalka, kaas oo ah in si buuxda loola dagaalo hogaanka Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in heshiis buuxa ay labada dhinac wada qaataan iyada oo saxiixa heshiiskaas ay goobjoog ka ahaan doonaan qaar kamida wadamada taageera dowlada Fedaraalka. Saxiixa Heshiiskaan ka dib, Jubbaland waxa u bilaaban doonta waji cusub oo sahlaya in dadka deegaankaas ay helaan hogaan midaysan oo ka shaqaynaya danaha Jubbaland.
Article horeWar Deg Ah dagaal ka dhacay duleedka Kismaayo oo kordhay
Article soo socda:-Maxkamadda Ciidamada oo xukuno kala duwan ku ridey 10 Askari